हेटौंडा अस्पतालका मेसु डा. श्रेष्ठलाई कोरोना विरुद्धको पहिलो खोप लगाएर अभियान शुरु - TEAMTV
हेटौंडा अस्पतालका मेसु डा. श्रेष्ठलाई कोरोना विरुद्धको पहिलो खोप लगाएर अभियान शुरु
१४ माघ, हेटौंडा । देशैभर आजबाट शुरु भएको कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप अभियान अन्तर्गत मकवानपुरमा पनि शुरु गरिएको छ ।
बुधबार हेटौंडा अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट प्रविण श्रेष्ठलाई कोरोना विरुद्धको पहिलो खोप लगाएर अभियान शुरु गरिएको छ । कारोना विरुद्धको खोप अभियानका लागि प्रदेशमा ७६ हजार थान खोप आईपुगेको छ । प्राप्त खोप मध्ये प्रदेश २ का धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पसौ जिल्लामा समेत वितरण गरिने सामाजिक विकास मन्त्रालयका बरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक डाक्टर पुरुषोत्तम सेढाईले बताउनुभयो । पहिलो चरणमा स्वास्थ्यकर्मी, सफाई कर्मचारी, एम्बुलेन्स चालकहरुलाई लगाईने खोपका लागि प्रदेशभरि ३५ स्थानमा खोप केन्द्र रहेका छन् । भने यस अन्तर्गत ६४ हजार १ सय ९२ जना स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई खोप लगाईने भएको छ । मकवानपुरमा कार्यरत २ हजार २ सय ८९ जना स्वास्थ्यकर्मीलाई पहिलो चरणमा यो खोप लागाईने छ ।
अघिल्लो सामग्रीहेटौंडा १० का कृष्णबहादुर कार्की सडकपेटीमा बसेर सहयोग माग्दै
यसपछिको सामग्रीनेपालमा कोराना खोप ल्याउन सरकार सफलः मुख्यमन्त्री पौडेल